Torohevitra tsara indrindra ho an'ny paikady marketing amin'ny atiny arivo taona mahomby | Martech Zone
Zoma, Desambra 7, 2018 Zoma, Desambra 7, 2018 Stacey Wonder
Tontolo misy horonan-tsary saka, marketing viral, ary ny zavatra lehibe manaraka. Miaraka amin'ireo sehatra rehetra an-tserasera hahatratra ireo mety ho mpanjifa, ny fanamby lehibe indrindra dia ny fomba ataovy mifandraika amin'ny vokatrao sy tadiavinao amin'ny tsena kendrenao ny vokatrao.
Raha millennial ny tsenanao kendrena dia manana asa sarotra kokoa ianao mikarakara izay ilain'ny taranaka mandany ora maro isan'andro amin'ny media sosialy ary tsy ampiasain'ny teknika ara-barotra mahazatra.
Ny taranaka mahalala tsara izay tadiaviny ary tsy milamina amin'ny zavatra kely kokoa dia vahoaka marobe. Na eo aza izany dia tsy azo atao izany mamorona paikady marketing mahomby izay mikendry ny taonarivo, mila fomba vaovao hifandraisana amin'izy ireo fotsiny izany.
Inona no tsy mandeha?
Raha manandrana hahatratra an'arivony taona ianao dia misy zavatra vitsivitsy tokony hialana raha te hanana fanentanana amin'ny marketing mahomby ianao:
Hevitra mifototra amin'ny lahatsoratra an-tsoratra
Doka amin'ny fahitalavitra sy gazety
Ireo zavatra ireo dia mazàna mampiala ny millennial ny orinasa na ny vokatra. Tsy tian'izy ireo lazaina amin'izy ireo hoe inona no hividy amin'ny fomba mitovy amin'ny lasa izay namaly tsara ny glitz sy ny famirapiratan'ny dokam-barotra napetraka tsara sy ny fivarotana miharihary.
Inona no miasa?
Zavatra telo no zava-dehibe amin'ny famoronana paikady marketing mahomby ho an'ny taonarivo. Ianao dia tsy maintsy: Mandraisa anjara, mampiala voly ary manabe.
Fandraisana an-tanana ny Arivo Taona:
Tranonkala media sosialy toy ny Instagram, Snapchat, Twitter, ary Youtube no ampiasain'ny The plateforme tonga lafatra amin'ny famoahana sy fampiroboroboana atiny izay mahavariana, azo zaraina, ary ny tena zava-dehibe, azo ifandraisana.
Vao haingana, Honda dia namorona fanentanana ara-barotra tena mahomby mikendry ny millennial amin'ny alàlan'ny fampiasana sivana Instagram sy andiana SnapChats izay nozaraina toy ny afo mando. Ny fomban'izy ireo dia namela azy ireo hamorona atiny azo zaraina sy azo zaraina amin'ny fomba maoderina sy mifandraika amin'ny fiaraha-monina nefa tsy manery mafy ny mivarotra.
Wendy's dia mitazona kaonty Twitter mavitrika izay mamaly matetika ny fanontanian'ny mpanjifa hatsikana maranitra, maranitra ary mahatsikaiky. Ity karazana "trolling" ity dia vato fehizoron'ny kolontsaina arivo taona ankehitriny ary ny fidiranao ny tanjonao ho tonga arivo taona amin'ity fomba ity no ahazoanao tombony tsara indrindra amin'ny fidiranao amin'ity tobin'ny mpanjifa tadiavina ity.
Iray amin'ireo singa lehibe amin'ny famoronana paikady marketing mahomby sy mahombyizany millennial kendrena izany dia amin'ny alàlan'ny fampandraisana anjara mavitrika azy ireo amin'ny sehatra media sosialy izay tian'izy ireo ampiasaina. Amin'ny fanaovana izany dia mandray ny dingana voalohany amin'ny fampitomboana ny tobin'ny mpanjifanao ianao ary amin'ny fanatratrarana ireo tanjonao sy ny vinavinanao tombony.
Mialamboly Arivo Taona
Ny vidéo dia nanjary juggernaut sy orinasa marketing mandany dolara an-tapitrisany isan-taona amin'ny fanaovana dokambarotra an-tsary amin'ny tranokala sy sehatra media sosialy. Fa ny fanao mahazatra-izao-izao-antsika-ary-ity-ity-izay-ivarotantsika fomba marketing amin'ny horonantsary dia tsy hanao na inona na inona hampifaly ny mpanjifa an'arivony taona.
Ny horonan-tsary Viral dia a ampahany lehibe amin'ny marketing ary ny famoronana horonan-tsary lasa zavatra lehibe manaraka dia ny fomba tsara indrindra hampiala voly sy hisarihana ny tobin'ny mpanjifa arivo taona. Miaraka amin'ny adiny 4 mahery isan'andro an-telefaona ataon'izy ireo, azo antoka ny milaza fa tia horonantsary tsara ny olona an'arivony taona. saka, tsy mahomby, fanesoana, remix ny vaovaom-baovao, famakiana molotra ratsy, lazao azy ireo fa nojeren'izy ireo.
Orinasa maro toa an'i Old Spice sy GoDaddy no malaza noho ireo dokambarotra an-dahatsary malaza be indrindra noho ny hatsaram-panahin'izy ireo, ny maha-lahy na vavy, ny vazivazy, ary indraindray midina-tsara-tena-izao tontolo izao-realness.
Ary tsy horonan-tsary intsony izao!
Ary raha horonan-tsary mahatsikaiky fohy is fomba iray tsara hampiasana ny mpihaino an'arivony taonanao, ny tena izy dia tsy izy ilay lalana tokana. Ny fialamboly ireo mpihaino an'arivony taonanao dia azo tratrarina ihany koa amin'ny alàlan'ny lahatsoratra fohy mahaliana mifandraika amin'ny zavatra inoan'izy ireo, ny olana ara-tsosialy ary ny fitantarana ny zava-misy. Ny ankamaroan'ny olona, anisan'izany ny millennials aleony ny tantara fohy sy mahasarika izay manery azy ireo hamaky ilay sombin-javatra iray manontolo. Raha tsy mahay mamorona atiny famoronana famoronana ilaina hitadiavana sy hampiala voly ny mpihaino kendrenao ianao dia azonao atao ny mieritreritra mitady mpanoratra tsy miankina amin'ny sehatra toa ny Upwork na manakarama mpanoratra avy amin'ny serivisy toa EssayTigers.
Sivana, meme. boomerangs, sticker, clickbait ary kilalao finday dia nanjary fomba mahomby amin'ny fikendrena ny mpihaino tsy voaro amin'ny teknika ara-barotra mahazatra. Ireo endrika fialamboly fanampiny ireo dia mitaky fitia sy fizarana an-tapitrisany izay mampiroborobo an-tsokosoko ny vokatrao nefa tsy manery azy hidina any amin'ny tendan'ny mpanjifa mety.
Na izany aza, manapa-kevitra ny hampiala voly ny mpanjifa an'arivony taona amin'ny alàlan'ny tetikadinao ara-barotra ianao, alao antoka fa hanaraka ireto toro lalana tsotra ireto ianao:
Ataovy Tiany io!
Ataovy azo zaraina!
Ataovy misy ifandraisany!
Ataovy azo ifandraisany!
Fanabeazana ireo Arivo Taona
Ny fampianarana ny taonarivo ny tombotsoan'ny vokatra no singa farany tokony hodinihina rehefa mamolavola paikady marketing mahomby ho an'ny taonarivo. Arakaraka ny fahalalan'ny arivo taona ny momba ny orinasanao sy ny vokatrao - manomboka amin'ny fomba namoronana azy ka hatrany amin'ny alehan'ny tombom-barotra, dia vao mainka mety handray fanapahan-kevitra hividy avy aminao izy ireo.
Diniho ny famolavolana paikady ara-barotra izay, ho fanampin'ny tanjonao hafa, ampianaro ny fototra kendrenao mandritra ny arivo taona momba ny tombontsoa amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, ny zon'olombelona, ​​na ny asa soa izay ny tombom-barotra amin'ny vokatra dia mandeha mivantana amin'ny fanampiana. Amin'izany fomba izany dia mahatsapa ny herin'ny fividianany ireo olona an'arivony taona raha tsy meloka amin'ny fanjifana azy ireo.
Ny orinasan-damba Patagonia dia nanome vao haingana ny tombom-barotra mandritra ny andro amin'ny fivarotana Black Friday amin'ny fiantrana. Ny fivarotan'izy ireo dia teo amin'ny tampon-trano ary ny paikadim-barotra dia niantehitra betsaka tamin'ny taonarivo nifandray tamin'ny antony ary mizara ny vaovao amin'ny namana sy mpanaraka.
Na ny ALS Ice Bucket Challenge aza dia nanahirana tokoa fampielezan-kevitra mahomby amin'ny marketing izany fanabeazana mifangaro amin'ny fanomezana asa soa izany amin'ny fomba mahafinaritra sy manaitaitra izay mora noforonina ary nanome fotoana iray ho an'ny laza Internet. Tamin'ny farany, nanangona $ 115M mahery ny fikambanana tamin'ny fanomezana.
Ny orinasa hafa dia nanaraka tetika mitovy amin'izany amin'ny tsena sy dokam-barotra amin'ny alàlan'ny fampahafantarana ireo mpiasa an'arivony taona momba ny asa soa ataon'izy ireo, mampifanaraka ny tenany amin'ny fampielezana varotra miandalana amin'ireo mpivady mitovy taovam-pananahana sy mpivady, ary mampiroborobo ny politikany sy ny fomba fampiasa amin'ny fampidirana mpiasa aza hampahafantatra amin'ny mpanjifa ny karama fifaninanana sy azo iainana. ary tombony azo amin'ny mpiasany rehetra.
Ny fampidirana ny fanabeazana ao anaty paikadinao dia manan-danja amin'ny fahatongavan'ny arivo taona. Arakaraka ny ahafahanao mampifandray azy ireo amin'ny lafiny samihafa amin'ny vokatra na orinasa iray, ny mora kokoa dia ny mamorona tsy fivadihana maharitra sy amin'ny fivarotana vokatra ho azy ireo amin'ny fomba mandaitra.
Ahoana no ahafahanao mampandeha azy!
Na dia mamelatra ny sori-dalana mankany amin'ny fampielezana marketing mahomby aza izay mikendry ny millennial dia mora, ny dingan'ny fanatanterahana izany dia mitaky asa be satria samy hafa ny vokatra, ny marika ary ny orinasa.
Atombohy amin'ny fikarohana ny paikady ara-barotra mahomby (ary tsy nahomby) nampiasain'ny orinasa hafa. Ianaro avy amin'ny fomba nanatanterahan'izy ireo izany, ny fitaovana nampiasain'izy ireo ary ny fomba nahafahan'izy ireo nanao mirotsaha, mampiala voly ary manabe ny tobin'ny mpanjifa arivo taona.
Trangan-javatra ratsy indrindra, manakarama arivo na roa arivo taona mba hanomezana anao ny fahitana ilainao fotsiny momba izay tadiavin'ny demografika be mpitady indrindra.
Tags: sivanamêmes. boomerangsoriginalityautocollant
Stacey Wonder dia mpivarotra atiny efa za-draharaha sy mpanoratra tsy miankina. Stacey dia namorona lahatsoratra bilaogy ho an'arivony taona maro momba ny lohahevitra mifandraika amin'ny fanabeazana, fampandrosoana ny tena, asa ary marketing. Stacey dia manandrana mampivelatra hatrany ny fahaizany matihanina ary mizara fanao tsara indrindra amin'ny hafa. Rehefa tsy dia be atao amin'ny tetikasany i Stacey dia manoratra tantara mpitsongo fohy.